KUNYARA: ZVINHU ZVINOKOSHA KUVANHU VECHIDUKU - Element Society
CHINHU: ZVINHU ZVINOKOSHA KUVANHU VECHIDUKU
Zvakawanda zvinopomerwa nemaBritish media, inguva yekudzinga manhema pamusoro pe "feral teens" kuti aone kuti chii chinokosha kwavari uye zvavari kuita semugumisiro. Dzokera kune rimwe boka reMwaka 12 vadzidzi vehurumende yeUnited States yokugadzirisa vechidiki, National Citizen Service (NCS) mukukurukurirana. Inzwa pfungwa dzavo pamusoro pemisoro yakasiyana-siyana kubva kumativi ose, ruzivo, zviroto uye zvishuvo, vhidhiyo, vanofurira, rusununguko uye kupandukira.
Element muzvipiri Cheyenne wakakokwa kuti atsigire NCST paMusangano weKushambadzira Kwevechipiri musi weChina, March 22, 2018. Cheyenne inoratidzirwa seimwe yezvidzidzo zvenyaya muNCS Youth Report yakatanga kuDecember Conference. Cheyenne achagara pane rimwe boka ane mashomanana emamwe maCSS Grads uye Graduate Manager James Canvin pachiitiko chevhiki inotevera muLondon.